युगसम्बाद साप्ताहिक - शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 12.11.2019, 11:21am (GMT+5.5) Home Contact
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा
आज यहाँ राजनीति गर्नुको मुख्य उद्देश्य सबैले शक्तिलाई एकलौटी पार्ने मात्रै बनाएका छन् । त्यतिबेला नीति–अनीति बराबर हुन्छ । हुन त नेता भन्न लायक विरलै होलान्, तैपनि तिनीहरूले इमानदारीलाई कमजोरको आचरण ठानेजस्तो छ । कानुन नियमका बार–परखाल नभत्काउने पनि के को नेता ? भनेजस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू सर्वतन्त्र, स्वतन्त्र र स्वच्छन्द छन् । मनपरी गर्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने तागत आफूसंग भएको अभिनय गर्छन् । भ्रष्टाचार, बेइमानी र ठगी धन्दा यिनीहरू आफ्नो विशेषाधिकार ठान्छन् । राजनीतिलाई त यिनीहरूले पैसा कमाउने कारखाना बनाएका छन् । इमान र नैतिकतालाई त सोझा सिधालाई सुनाउने उपदेश मात्र बनाइएको छ ।
केही अपवाद छोडेर दिनको दशपटक झूठो बोल्नु, ढाँट्नु, छल्नु र दुनियाँलाई भ्रममा पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममात्रै किन गरिरहेका छन् ? आखिर के का लागि ? सत्य जवाफ एउटै छ– फाइदाका लागि । चोरले किन चोरी गर्छ ? ठगले ठगीधन्दा किन गर्छ ? फाइदा नहुने भए किन गर्थे होलान् त्यस्तो गैरकानुनी काम ! त्यस्तो अनर्थ गर्ने आँट र हैसियत सानातिनासंग हुँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचार, दुराचार, शोषण, अन्याय, अत्याचार कथित नेताका एकलौटी विशेषाधिकार भएका छन् । यसरी मित्थ्याचारलाई सदाचार बनाउनेहरूले आफैं लाजमान्नु पर्ने हो तर जस्तोसुकै दुष्कर्म गर्न परे पनि पछि नहट्ने हिम्मत देखाइरहेका छन् । अब नेतृत्वका लागि सच्चरित्रता र अनुशासनको आवश्यकता छैन जस्तो छ । यस्तो स्थितिमा सामान्य मान्छेले के सिक्ने ?
यहाँ आएर टीना–बोतल–कागज–फलाम फलाक्दै कबाडी सामान र फोहरबाट सामान उधिनेर प्राण धान्नेहरूले समेत सोनिया गान्धी र मनमोहन सिंहको प्रशंसा गरेको सुनिन्छ, तर यहाँका नेता भनाउँदा भने सहसचिवस्तरको उनैको राजदूतलाई साष्टांग दण्डवत गरेर एकले अर्काको बदख्वाई गर्छन् किन ? सोच्नुपर्ने अन्तर्वस्तु छ यहाँ । आफूलाई जनजाति भन्नेहरूमा उच्च शिक्षित र सम्पन्नहरूकै बाहुल्य छ । देशको पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक औद्योगिक पक्षमा उनीहरूकै पकड छ । एनजीओ–आईएनजीओहरूमा उनीहरूकै हालिमुहाली छ तैपनि उनीहरू नै भड्किनुका पछाडिको रहस्य बुझिनसक्नु छ ।
जनताको नाम लिएर जनताकै शोषण गर्नेहरूकै आवाज चर्को छ । नेता जेजे भन्छन् त्यो त्यो गर्दैनन् । हिजो एकथरिले खाए आज अर्काथरिले खाँदैछन् । जनता त जहाँको तहीं । त्यसैले नेताका दुर्नियतले गर्दा आज नेपाली नेपालीबीचको सद्भावना नै खलबलिने अवस्था हुनाले सबै सचेत हुनुपर्ने स्थिति छ ।
शरीरको एउटा पनि कुनै अंग कमजोर भयो भने शरीर स्वस्थ मानिंदैन । त्यस्तै देशका सम्पूर्ण जनता सम्पन्न र सुखी नभएसम्म प्रगति भएको मान्न सकिंदैन । तर आज यहाँ एकथरि ठूलाबडा भनिने तस्कर, भ्रष्टाचारी र नेता सम्पन्नमाथि सम्पन्न र अर्काथरि विपन्नमाथि विपन्न हुँदै धस्सिदै गएको स्थितिमा समान रुपले सबैको उत्थान हुने कार्ययोजनाबाट कामै देखाउन सके मात्र विश्वास जाग्ने थियो कि ! नत्र आफ्नो यथार्थ धरातल नबुझी दलहरूका खोक्रा नारा र आदर्शका हावादारी गफ अनि जातीय राज्य जस्ता विभेदकारी कुराबाट पारलाग्ने अवस्था छैन । आज जेजस्तो भोगिएको छ यो जनताको नभएर भ्रष्टहरूको व्यवस्था भएको छ ।
घर चलाउन होस्, कुनै संस्था चलाउन होस् वा राज्य चलाउन नै किन नहोस्, आवश्यक नियन्त्रण र अनुशासनको सन्तुलन मिलाउन जानिएन या सकिएन भने त्यहाँ भाँडभैलो चल्छ र अराजक स्थिति उत्पन्न हुन्छ । कसै न कसैको उचित अदप नहुने र नमान्ने हो भने कुनै पनि व्यवस्था वा संस्था चल्न सक्दैन । नियम, कानुन र विधि विधान चाहिने नै त्यसैका लागि हो । स्वतन्त्रता बढी भयो भने पनि त्यसले स्वच्छन्दता निम्त्याउँछ भने त्यसैले मनपरीतन्त्रलाई ढोका खोलिदिन्छ र अन्ततः त्यो विनाशकै कारण बन्न सक्छ । अहिले पार्टी भाँडिएर फुटेपछि प्रचण्डका आँखा खुलेजस्तो छ । उनले केन्द्र बलियो पार्ने दस्तावेज बनाउने भए । केन्द्र बलियो नभै तहतहमा अनुशासन कायम नहुने रहेछ भन्ने तत्वबोध भयो भने ढिलै भए पनि राम्रै होला ।
त्यसै गरी केन्द्र बलियो नभै संघ राज्यहरू पनि भाँडिन्छन् र चल्दैनन् भन्ने महसुस पनि बेलैमा भैदिए हुन्थ्यो । बलियो केन्द्रले मात्रै तल अनुशासन कायम गराउन सक्छ र छिरलिएर भताभुंग हुनबाट जोगाउन सक्छ भन्ने शुद्धि चाँडै आएर आवश्यक विकेन्द्रीकरणद्वारा देशलाई सुल्टो बाटोमा हिंडाउनुपर्ने आवश्यकता बोध पनि भैदिए हुन्थ्यो । संघीयताका प्रसंगले यहाँ आजै अराजकता निम्त्याइसक्यो भने भोलि लागू भएमा के होला ? बोराको तोरी छिरलिएपछि समेलीनसक्नु हुन्छ । त्यसैले आवश्यक अनुशासन कायम गर्ने प्रविधि वेगर कुनै पनि काम राम्रोसंग चल्न सक्दैन । देशको केन्द्रीय शासनलाई बेहद खुकुलो बनाएर काम छैन भन्ने बुद्धि पहिले नै आइदिएको भए देशले आजको दुर्गति नै भोग्नुपर्ने थिएन । जे होस्, अझै पनि केही सम्पन्न जातलाई जातीय राज्य बाँडेर देशमा अरु अराजकता मच्चाउने काम नहोस् ।
आवश्यक नियन्त्रण विनाको कुनै पनि काम या व्यवस्था अराजक हुन्छ । संघ राज्य प्रणाली लागू गरिएमा त्यसबाट त झनै स्थिति विस्फोटक हुनसक्छ । आज देशमा एकता, परस्पर सहयोग, सद्भाव र अनुशासन भन्ने कुरा नै भताभुंग भैसकेको छ । त्यसेले देशमा अरु भाँडभैलो नहोस् भन्ने हो भने १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र एवं नगरपालिका र गाविसहरूलाई यथोचित अधिकार दिएर कसिलो र खुकुलोपनको सन्तुलन मिलाउने हो भने यहाँ कुनै विपत्ति आउँदैन । आफ्नो देशको वस्तुस्थिति र आफ्नो यथार्थ धरातल बिर्सेर अरुकै नक्कल गर्ने र अरुकै इशारामा चल्ने हो भने विपत्ति आउनु स्वाभाविक हुन्छ । आशा गरौं, नेता हुँ भन्नेहरूमा सदबुद्धि जागोस् ।